Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 6: Akonadi no-NEPOMUK united | Kusuka kuLinux
Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 6: Akonadi noNEPOMUK babumbene
Lolu chungechunge lwaphakade, oseludonse isikhathi eside (ingxenye 1, ingxenye 2, ingxenye 3, ingxenye 4 y ingxenye 5), izamile ukukhombisa amandla wesici esithile se-KDE, esikhohliwe kuzibuyekezo futhi okwenza umehluko phakathi kwe-KDE namanye amadesktophu laphaya. Kungumzamo wokusivumela ukuthi sishiye i-NEPOMUK inikwe amandla kumakhompyutha ethu, umzamo obelokhu umangalisa ngempela kuze kube manje. Kepha lokhu akumi.
Lokhu kungumnikelo ovela ku-Ernesto Manríquez, ngaleyo ndlela eba ngomunye wabaphumelele emncintiswaneni wethu wamasonto onke: «Yabelana ngalokho okwaziyo ngeLinux«. Siyakuhalalisela u-Ernesto!
Uma siphinda, siphinde sabona ama-KIOslaves ayi-6, amadokhumende akamuva: /; umugqa wesikhathi: /; amathegi: /; sesha: /; imisebenzi: / ne-nepomuksearch: /, kanye nentuthuko yokuhlola efana nokuhlanganiswa kwezingxenye zePlasma Active kudeskithophu yePlasma nokuhlanganiswa phakathi kwe-Amarok neNEPOMUK, nezinye ezingezona ezokuhlola, njengePlasma Multimedia Center. Kodwa-ke, kube nokulahleka okukhulu nokukhulu, futhi kungenye ingxenye ye-KDE mayelana nokuthiwa izinto kuthiwa zimbi, noma zimbi kakhulu, kunalokho okushiwo nge-NEPOMUK: Akonadi, noma i-database esezingeni eliphakathi yama-imeyili nolwazi mayelana Abantu be-KDE. Ukuhlanganiswa phakathi kuka-Akonadi no-NEPOMUK kuqinile impela, kunezinkinga kokunye okuba nomthelela kokunye, njengoba u-Akonadi esebenzisa i-NEPOMUK ukwenza imisebenzi eminingi ebalulekile.
Siya ezingxenyeni ezithile.
1 Ukuxhumana Komuntu
3 Insiza ye-Akonadi "NEPOMUK Tags"
4 Amakheli e-imeyili
I-NEPOMUK ikhomba konke okuhlobene nomuntu othize, futhi ikufaka ngohlobo olukhethekile, olubizwa nge- PersonContact. Lokhu kufanelekile, ngoba uma sivula i-PersonContact ku-KRunner, noma eHomerun entsha, sizothola iwindi leDolphin elinegama lomuntu, nayo yonke imibhalo nama-imeyili ahlobene nayo, uma sesizikhombile. Lokhu kubukeka kanjena.
Vele, uma sichofoza ku-imeyili ngayinye kulawa, iwindi elihle le-KMail lizovuleka liyikhombise. Kepha ukufika kulokhu, kufanele kuqala sikhombe amafayela ethu nama-imeyili. Futhi lokhu kungenzeka akwenzekanga, noma ngabe silandele okokufundisa kusuka engxenyeni 1.
Kusekhona isiphazamisi ku-KDE 4.10, okuthi, ngaphansi kwezimo ezithile, sivimbele u-Akonadi ekutholeni i-NEPOMUK lapho u-Akonadi esebenza njengengxenye yokuqalisa kohlelo. Ukuqinisekisa ukuthi ama-imeyili ethu azokhonjwa, kuzodingeka, okwamanje, ukuvula i-Akonadi console (akonadiconsole) bese siqala kabusha insiza ye-Akonadi Nepomuk feeder. Sethemba ukuthi le bug, ebisivele ibikiwe, izolungiswa ngokushesha okukhulu.
Lapho nje le nkinga isixazululiwe, kufanele sinake izinsiza ze-Akonadi ... ngoba sinezimanga.
Insiza ye-Akonadi "NEPOMUK Tags"
Ibhokisi lokumisa elidala nelidumile le-KMail alisebenzi nje kuphela ukufaka ama-akhawunti we-imeyili, kepha liyakwazi ukwengeza insiza esetshenzisiwe encane kakhulu, kangangokuba yaphuka ngokuphelele nokuthi yavuselwa ku-KDE 4.10.2: the Tags insiza. Kokuncamelayo | Lungiselela i-KMail ... kufanele sengeze, kuphaneli yama-akhawunti, insiza "Amathegi". Uma usuqedile, kubukeka kanjena.
Isisetshenziswa se-Tags singenisa, njengoba sibonile, futhi sinikezwe ukuthi i-KDE 4.10.2 noma ngaphezulu isetshenzisiwe, uchungechunge lwamathegi azenzakalelayo ama-imeyili, alayiniwe, athunyelwe, abalulekile, adluliselwe futhi aphendulwa. Igama ngalinye kulawa liyazichaza, futhi ngubani othola uma iphenduliwe iposi, idluliselwe noma ibalulekile ayikho ngaphezu kweNEPOMUK. Vele, lokho kuhlukaniswa kweqa amabhokisi eposi, ukuze kuthi uma kukhona amabili noma ngaphezulu awo, lawa mafolda azoqukatha wonke ama-imeyili abalulekile, ngokwesibonelo, avela kuwo wonke ama-akhawunti.
Vele, amathegi amaningi angangezwa. Ngeshwa, lokhu akukwazi ukwenziwa kusuka ku-KMail, kepha kufanele kwenziwe kusuka kuDolphin, nasengxoxweni efihliwe "Amathegi" oyithola ngokuchofoza kumbhalo ohlaza okwesibhakabhaka othi "Faka amathegi" kuphaneli yolwazi. Sethemba ukuthi le nkinga ye-ergonomics isilungisiwe. Noma kunjalo, ukumaka ama-imeyili kulula, futhi kungenziwa ngokuchofoza kwesokudla kuma-imeyili azomakwa, bese ukhetha “Maka umlayezo | Guqula ilebula lomlayezo ”.
Amanothi angabuye afakwe kumilayezo, amanothi agcinwe ku-database ye-NEPOMUK.
Mhlawumbe into ehlaba umxhwele kakhulu ngokuxhaswa kwe-NEPOMUK, futhi ngombono wami, okuvame kakhulu nokujwayelekile futhi nokuguqula okuncane kakhulu ukuthi ngaphandle kwe-NEPOMUK ukuqedelwa kwamakheli ngokuzenzakalela ngeke kusebenze, okungukuthi, ukuthi uKontact usebenzisa amakheli agcinwe encwadini yamakheli (okuyinto kuhle kungaba yizinkulungwane, ikakhulukazi uma usebenzisa izinsiza zeGoogle) kanye namakheli wakamuva, ukuletha imiphumela esheshayo. Iqiniso ukuthi lokhu kungukusebenza okuvele kukhona kwamanye amaklayenti eposi, futhi ngikusho lapha ukuze kuphelele.
I-KDE 4.10.3, esanda kuphuma kuhhavini, yethule i-indexer entsha ye-imeyili, eshesha kakhulu futhi ethembeke kakhulu kunaleyo eyedlule, okuyinguqulo encane yezinguquko ezinkulu eza ku-KDE 4.11 kule ndawo. Ngakho-ke uma ungakawenzi u-Akonadi no-NEPOMUK basebenze, noma ukhombe ama-imeyili ngawo, lesi isikhathi.
Ingxenye yokugcina yochungechunge oluthi “Welcome to the Semantic Desktop” izobe imayelana nokubhekana nezinkinga zokusebenza kwe-desktop, ukuthi yini okufanele uyenze esimweni esiphuthumayo, nokuthi yini okufanele uyenze lapho ama-CPU asetshenziswa kakhulu. Sobonana kuze kube yileso sikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 6: Akonadi noNEPOMUK babumbene
Uchungechunge oluhle kakhulu lokuthunyelwe! Siyabonga ngokwabelana nabo!
Uchungechunge lokuthunyelwe luhle impela. Ikakhulu kusukela into yokuqala efundwa njengesiphakamiso lapho ufaka i-KDE ukukhubaza zonke lezi zinsizakalo ngaphandle kokucabanga ngesizathu sazo.
Ukuphathwa okuhle kakhulu kobuchwepheshe bedeskithophu be-KDE kuyakhonjiswa, engizama ukukusebenzisa.
Imininingwane enhle kakhulu, ngenkathi ngifunda izingxenye ezedlule ngibonile ukubaluleka kwedeskithophu namandla we-semantic (izikhathi eziningi zikhohliwe njengoba usho futhi kunjalo) zemvelo ye-KDE ne-nepomuk.
OSX_Aurorae: Itimu yami yokuqala ye-Aurorae
Izibalo zokugcina ezinikezwe yi-Counterizer yezivakashi zethu (izwe, i-OS, isiphequluli)